famokarana lohamenaka: hampiasana teknolojia vaovao | NewsMada
famokarana lohamenaka: hampiasana teknolojia vaovao
Nihaona tamin’ny Vondron’ny mpanondrana lohamenaka eto Madagasikara (Gehem), ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy (Medd), Rtoa Raharinirina Baomiavotse Vahinala, ny 30 jona teo. Noresahina ny olana sedrain’ny mpandraharaha mpanondrana sady nokarohina ny fanatsarana azo atao amin’ny fiaraha-miasany amin’ny fanjakana. Nohamafisin-dRtoa minisitra ny maha zava-dehibe ny fambolen-kazo sy ny hanavaozana izany. Nitatitra ny zava-bitany nandritra ny taona 2019 sy 2020 ny Gehem.
Nodinihina ny paikady ifanarahan’ny roa tonta ato anatin’ny fohy ezaka sy lavitr’ezaka.
Karohina ny hampihenana ny fahapotehan’ny ala, izay ateraky ny fampiasana kitay sy hazo betsaka amin’ny fitanehana ny zavamaniry hakana ny lohamenaka. Tsy maintsy hirosoana tsikelikely ny fanovana ny teknolojia, noho izany, toy ny fampiasana ny karazana angovo maitso.
Mahatsapa ny roa tonta fa anisan’ny rohim-pihariana manana ny lanjany ho an’ny firenena ny famokarana lohamenaka. Tafiditra ao anatin’ny paikady toekarena maitso, izay tanjon’ny minisitera hanatrarana ny fandrosoana lovainjafy.
Miisa 55 ny mpikambana ao anatin’ny Gehem. Hatsangana ny vovonana iraisan’ireo fikambanana mpandraharaha amin’ny lohamenaka eto Madagasikara samihafa. Maherin’ny 1.000 ny karazana zavamaniry azo hakana lohamenaka eto amintsika. Manodidina ny 300.000 ny Malagasy mivelona aminy.